आरोप लगाऊँदैमा डराऊने भन्ने हुन्छ? खाएको बिष पो लाग्छ, नखाएको बिष कहाँ लाग्छ र? - Jagaran Post
Home/मुख्य समाचार/आरोप लगाऊँदैमा डराऊने भन्ने हुन्छ? खाएको बिष पो लाग्छ, नखाएको बिष कहाँ लाग्छ र?
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले आफूमाथि लागेको आरोपबारे काठमाडौँ फर्किएपछि विस्तृत प्रतिक्रिया दिने बताउनुभएको छ ।
“ममाथि लागेको आरोप प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार छु”, बेलडाँडी गाउँपालिकामा आज बिहान आयोजित कार्यकर्ता भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक रङ दिएर अफवाह फैलाउनुको अर्थ छैन ।”
जनपक्षीय काम गर्दै गएमा प्रतिक्रियावादी वर्ग आफैँ परास्त हुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ थियो । “आरोप आफँैमा ठूलो कुरो होइन, आरोप दिनदिनै लाग्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकार सञ्चालन गर्दा आरोप लाग्दै जान्छ ।”
उहाँले सरकार भ्रष्टाचारको आरोपमा चुलुम्म डुवेको, कहाँ डुब्यो भन्दा बालुवाटारमा तर स्वतन्त्र निकायले छानविन गर्दा भ्रष्टाचारको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भएन भन्छन भन्दै स्वतन्त्र निकायले तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषिलाई कार्वाही गर्ने हो भन्नुभएको छ ।
उहाँले अभियुक्त हुनु र अपराधी हुनुमा फरक रहेको वताउदै स्वतन्त्र न्यायपालिकाले यसको फैसला गर्ने बताउनु भएको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले आफुलाई कहिले पनि आन्दोलन र वर्गलाई कहिलेपनि धोखा नदिने बताउँदै यति पैसा खायो भन्नेले प्रमाणित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ ।
अहिले प्रविधिले अनेक अडियो जोडेर राख्ने गरेको वताउदै अर्व खायो भन्नेले अहिले करोडमा झरेको बताउदै नेकपाको स्कुलिङबाट आफू आएको र भ्रष्टाचारलाई नेकपाले अस्वीकार गरेको बताउनु भएको छ ।
भष्ट्राचार कसैले गर्यो भने त्यसको जवाफदेहि पार्टि नहुने व्यक्ति हुन्छ भन्दै अभियोगको भरमा तर्सेर डराएर हिडनु नहुने बताउनु भयो ।
‘एक आँखो प्रेस हुँदैन । एक आँखो चिम्लिने त शिकारी हुन्छ । प्रेसले चाहिँ दुईवटै आँखा खुल्ला गर्नु पर्दछ’ भन्नुभएको छ । उहाले भन्नुभयो ‘तर अहिलेको प्रवृत्ति कस्तो छ भने शिकारीले जस्तो सरकारलाई ठोक्ने भएको छ, तर जति ठोके पनि केही फरकै पर्दैन । हामी काम गरिरहन्छौँ र काम गर्न छोड्दैनौँ ।
उहाले ‘खाएको विष लाग्छ, नखाएको विष लाग्दैन, एक-दुई दिन मजा लिन दिनुस् भन्नुभएको छ ।
सबैलाई विश्वासमा लिएर मात्र एमसीसी प्रक्रिया अंघि बढ्छ- सभामुख सापकोटा
२०७६ माघ १३, सोमबार १४:३१ गते
२०७५ माघ २१, सोमबार १५:२९ गते
२०७६ कार्तिक २६, मंगलवार १३:५९ गते